Abakhiqizi bezimoto basiqhatha namasela | Isolezwe
Abakhiqizi bezimoto basiqhatha namasela
ezezimoto / 8 June 2018, 3:11pm / STHEMBISO SHANGASE
UPHAWU lwezimoto zakwaVW lungezinye zezinto ezebiwa kakhulu
LWASHO lwafika lolo suku lokuthi sonke sihlokoze ama hazard ethu siyikhuze ithobe insimb’yomlungu silungiselele ukubuyela eceleni lapho kuphephe khona. Sekuyiso isikhathi sokuthi sincinde kulolu dengezi kwelakho lodumo lokuwela umfula ugcwele.
Ngiyazi ukuthi sihlangana lana nje izinhliziyo zabashayeli zisagxaza igazi zivuvukele ngenxa yokukhwela kwentengo kaphethroli ngamasenti angaphezu kwangu-80 ngelitha ngalinye. Nokho ngeke ngigxile ekuxoxeni ngale ndaba ngoba kwamina ngisaphuke umoya. Olwanamhlanje udengezi lwama hazard luthakwe ngezinyamazane eziyizinto ezincane kodwa ezicasulayo neziyisicefe.
Lana ngikhuluma ngokulahlekelwa yizicabeko zama rim ama-wheel cap nama-aerial. Kuvele kulahleke i-wheel cap eyodwa bese imoto ibukeka igugile sengathi yijazi elidliwe amagundane.
Uma uthi uyayithenga seyibukeka iyintsha yodwa wonke amanye asegqwalile bese kuyacaca ukuthi ayahlebana futhi ithanda ukuba yisicefe le nto. Lezi zivalo ezimise okwembenge ezinye zazo ziba sankomishi ephelela phakathi nesondo kuyenzeka zingaphumi ngephutha kodwa zikhishwe ngamabomu amasela azo.
Ziyashiyana-ke ngentengo ngoba kukhona ezibiza imali engafinyelela kuR3 000 isethi. Lapho-ke ngikhuluma ngalwa awuthayela ezimoto zakwaToyota. Lawama wheel cap adume ngegama le-87 ngoba aphuma neToyota Hiace GLX eyayiyisinqamu yangonyaka ka-1987. Ayinyama ikakhulukazi emkhakheni wamatekisi angamakhumbi.
Into eke ingihlekise wukuthi ngisho nezinye izinhlobo wena Nyathi, Ndlovu yiNissan Impendulo zonke zigqokiswa wona lo 87 wakwaToyota wodumo. Abashayeli bamatekisi bavamise ukuqikelela ukuthi uma sebelala bayawakhipha bawafihle ngaphakathi ekhumbini lawa ma-wheel cap.
Kubuye kube khona enye into engidinayo.
Leyo-ke ukwebiwa kwama-aerial omsakazo ezimotweni ikakhulukazi lawa akulufwayo. Nawo abawabheki ikakhulukazi ohunta. Yingakho abanye abanikazi bezimoto ikakhulukazi zakwa-VW bencamela ukuwakhipha uma besemicimbini ephithizelayo.
Kukhona enye into engicikayo indaba yokwebiwa kophawu lwemoto. Uma imoto yakho inalo M wakwaBMW osho ukuthi M-sport ocwebezelayo, yazi ukuthi bayawudinga ohunta. Ngisho nophawu uqobo lwe BMW luyahamba emaseleni antshontsha izinto ezincane. Nophawu lweMercedes-Benz nolweToyota abalubheki ohunta. Kodwa-ke eMlaza eThekwini bamandla ngolweVW namadevu asama-grill akubhampa.
EMaputo eMozambique babhoke ngokweba izibuko zezimoto nama lambu oku indicator maqede bakudayisele wena futhi. Ezinye zalezi zinto njengawo ama-wheel cap, yizimpawu nama-aerial kuyenzeka ukuthi ungakuboni ukuthi akusekho uyoze ubone ekhaya.
Ama-Hazard ophonsela inselelo abakhi bezimoto ukuthi bakhe kwenye imbiza uma befakela izimpawu nezicabeko zezimoto ukuze zingakhipheki kalula.
Hhayi-ke sivumeleni sithi sesikuqedile okwanamhlanje sethembe lo mshunqiso uzosilapha kuleli khanda elincane lento engidinayo. Sesingabuyela emgwaqweni siwavale ama hazard siqhubeke nokushayela ngokucophelela ukuze sihlangane sisawuphonsa umbalane nangesonto elizayo kuyo le nkundla.
Uma ufisa siyiqhube lendaba ngena ekhasini lethu Igedlela lami with Sthembiso Shangase kuFacebook. Yimi owenu nali ikheli ngezansi [email protected]